शब्दकिरण: August 2010
আপুনি কবিতা কিনিবলৈ আহিছে নে কি?
কবিতা জুখিব জানে আপুনি?
আঁৰি থৈছোঁ মোৰ বুকুতে।
আপোনাৰ হাতখন কাঁইটীয়া নহয়তো?
যদি কাঁইটীয়া হয়
আপুনি ওচৰলৈ নাহিব
পলাই পত্ৰং দিব পাৰে মোৰ কবিতাই
কুমলীয়া তুলাৰ দৰে তাই
আকাশলৈ ঊৰি যাব খোজে বাৰে বাৰে
কি আনিছে আপুনি কবিতা কিনিবলৈ?
যদি হিংসা আৰু ঈৰ্ষাৰ খুচুৰা পইচা
আপোনাৰ জেপত নাচি আছে
মই তুলি দিব নোৱাৰোঁ মোৰ কবিতা আপোনাৰ হাতত।
মোৰ বিৰাট ভয় মোৰ কবিতাক কিজানি আপুনি
চৰিয়াই দিব, গুৰিয়াই দিব
আৰু চোবাই চোবাই ডাষ্টবিনত পেলাই দিব।
আপুনি ভবাৰ দৰে মাংসৰ টুকুৰাও নহয় মোৰ কবিতা
আৰু কচাইৰ দোকানত ম‌ৃত্যুৰ ক্ষণ গণি থকা ছাগলি।
কচাইৰ দৰে যদি ৰেপি ৰেপি হত্যা কৰে আপুনি
বাতৰি কাকতৰ প্ৰথম পৃষ্ঠাত তাইৰ ছবি ওলাব
মোৰ অন্তৰে কিমান যে হাহাকাৰ কৰিব
জীয়াই থাকিবলৈ টান হ’ব
সেই কথা তো বুজিবলৈ অপাৰগ আপুনি।
আপোনাক কৈ থৈছোঁ
মোৰ কবিতাৰ গ্ৰাহক এজন
যিজনে তেওঁৰ হৃদয়খন বন্ধকত থয়
আৰু মোৰ কবিতাক নিজৰ বুকুত সুমুৱাই লৈ যায়
কাইলৈ তেওঁ নিশ্চয় আহিব কবিতা ঘুৰাই দিবলৈ
মই তেওঁৰ হৃদয়খন ঘুৰাই দিম
কিন্তু, মোৰ কবিতা ঘুৰাই নলওঁ।
মোৰ বিশ্বাস তেওঁ বৰ মৰমিয়াল
কবিতাক মৰম দিব জানে
ভালপোবাৰ পৰিভাষা বিচাৰি ফুৰা প্ৰেমিক তেওঁ নহয়।
আপুনিওঁ জানি থোৱা ভাল
শব্দকোষৰ এটি এটি পাত লুটিয়াই চাব
ভালপোৱা অপৰাধ বুলি ক’তো লিখা নাই।
Posted by किरणकुमार राई at 11:12 PM No comments:
Posted by किरणकुमार राई at 4:36 AM No comments:
Posted by किरणकुमार राई at 4:32 AM No comments:
Posted by किरणकुमार राई at 1:08 AM No comments:
Posted by किरणकुमार राई at 1:05 AM No comments:
Posted by किरणकुमार राई at 1:01 AM No comments:
मायाजालमा बन्दी शब्दहरु-१
चिप्लेर खसेको छ
डङ्गै उत्तानो पछारिएको छ
रगतपच्छे अक्षरहरू जन्माएर।
जुनी राम्रो होइन
फुर्सद पायो कि
घाउहरू चाटिबस्छ यसले।
बाझूँ म जीवनसँग?
क्षितिजको इन्द्रेणी पक्रन।
हारूँ म क्षितिजसँग?
बादलको रुञ्चे मुहार निहार्न।
ठुस्कूँ म बादलसँग?
बाँझो खेतमा शब्दको झरी बर्साउन।
के हेरेकी तिमीले मेरा आँखामा?
मौनताको जुलुस रोक्न
हल्लाहरुको सङ्गीत बजिरहेछ
मुमताजको आँसु खस्छ पलपल
सुरिलो धुन बज्दैन।
मेरो एफएम् रेडियोभित्र बजिरहन्छ गीत
तिम्रो सुरिलो कण्ठमा
निद्राको प्रदेशमा मलाई धकेल्दै
शोकधुन त्यहाँ पटक्कै बज्दैन।
Posted by किरणकुमार राई at 3:28 AM No comments:
मायाजालमा बन्दी शब्दहरु-२
आधारातमा ब्यूँझेको छु
अँध्यारोको साम्राज्य हेर्न
जुनकिरीको मुटु टाँस्छु
भार खप्न हम्मे हम्मे पर्छ
मौलाउन सकेनन आगोहरू
रापिलो भुप्रोभित्र सल्किरहन्छ
तिमीलाई लाग्दो हो
व्याकुल छु म
तिमी भ्रममा छयौ
म त साह्रै व्यस्त छु
उत्तानो परेको देख्यौ
आकाश पो ताक्दैछु
भर्खर बामे सर्दैछन
नातिनीको नौनी हात पक्रेर
रोप्नु त मैले प्रेम नै रोपेको
हृदयको उर्वर खेतबारीमा
घृणाहरू पो फलेछन
छोप्न त मैले चल्लाहरू नै छोपेको विश्वासको
भालेहरू पो बास्दैछन अविश्वासको
उज्यालै नछिर्ने झिसमिसे बिहानमा।
नकच्चरो डालिला छोराहरू
घ्याम्पाको शास्त्रीय सङ्गीतको तालमा
बिहानदेखि षष्ठअमृत घोक्दैछन।
ओदान स्याहार्दै बूढ़ी आमा
दाउरा चिर्दै बूदो बाबू
छोराहरू यमराजलाई सुम्पँदैछन।
पीड़ाका रोटी सेक्दैछन
आफू बिसेक हुनलाई।
Posted by किरणकुमार राई at 3:06 AM No comments:
मायाजालमा बन्दी शब्दहरु-३
छिन्द्रिङ्ग बज्यो चुरा
गर्भाधान भयो- सोचेको
कत्रो ठूलो भूल मेरो?
ह्त्या पो रहेछ!
कहिले छुटने हुन कुन्नि?
बिचरा ती निरपराधी बन्धुत्व!
जे पायो- खान्छन
जहाँ पायो- सुत्छन
के राम्रो बाली सप्रन्छ उनीहरुको!
छानी छानी खायो
सुकिलो डसना रोज्यो
सधैं बाली कचल्टिन्छ
के भा'को मेरो चाहिँ यस्तो?
निथ्रुक्क भिज्छन निर्वाङ्ग कविहरू
छाता ओड़ेरै सर्वाङ्ग ढाकी
अकवि पनि निस्कन्छन सिकोमा।
खल्तीभरि शरमहरू घुसारेर
चिहाउँछन पाठकहरु चेपबाट पर्दाको।
कुट्छन समीक्षकहरू ओखती
ठिङ्ग उभेको ओखलीमा आँगनको
निर्वाङ्ग निथ्रुक्क भिज्ने सर्दी भगाउन कविको।
मुखैभरि घीऊ नै घीऊ
निर्धाहरुको शिरैभरि पैतालाभरि
घाऊ नै घाऊ
मेरो पालो आवोस न
सिर्कना लाउँदै संसार डुलाउँछु तिमीलाई!
के फुटानी गर्छौ
अर्काकै हात पक्रेर
कागजको शिखर उक्लिरहेछौ।
के साह्रो डुलन्ते भएको
कुनै ठाउँ बाँकी छैन
Posted by किरणकुमार राई at 2:47 AM No comments:
मायाजालमा बन्दी शब्दहरु-४
आफ्नो गीत पो सुनाएको उनलाई
बेच्दै पो रहेछन मेरो घाउ
हाट-बजारमा जो कोहीलाई।
किन सिकायौ नि बाँसुरी बजाउन
सकेनन धरतीमा कसैले
सुपारी पायौ तिमीले
सरकोजी र ब्रुनीको
शिविर खोल्ने ठाउँ पाएनन ईश्वरले?
खचाखच छ पृथ्वी
कहिल्यै निको नहुने
भुसुक्कै निदायौ तिमी?
हेर, म अनिँदो छु
शब्द थुपार्दै तिम्रो पोल्टोमा हाल्दैछु।
भोली बिहान ब्यूँझँदा
शब्दको हारमा सजिएकी राजकुमारी पाउनेछ्यौ
मस्त निदाइरहेको मलाई
चुल्ठोमा पुल्ठो बाल्छन
दाह्री सजाउँछन बोकाहरू।
बाटोमा निस्केका छौ
नर्क जान तम्सेका हौ?
सापट दियौ नि छाती उघारो पारेर।
कति गाह्रो परिरहेछ!
बिरामी नै बिरामी
एकैजना पनि डाक्टर नभएको
हन यो कस्तो अस्पताल?
अड़ेको जस्तो लाग्यो
बढ़ेको जस्तो लाग्यो
हिँड़ेको जस्तो लाग्यो
घटेको जस्तो लाग्यो
हिड़्नदेऊ न मलाई
बाटोभरि ओछ्याउँछौ काँड़ाहरू
कुदाउँछु नि बुलडोज़र
वरपर केही नहेरी
फराकिलो पार्छु सड़क
अवरोध सबै निमिट्यान्न पारी!
Posted by किरणकुमार राई at 1:50 AM 1 comment:
मायाजालमा बन्दी शब्दहरु-५
दुइ आँखा त,
वल्लो घरको झिरीझिम्टी
पल्लो घरको चोक्टा-लाम्टा
चिहाउँदा नै ठिक्क भो!
तेस्रो आँखा शिवले खुस्काइहाल्यो
ईश्वर! संसार चिहाउन मलाई
चौथो आँखा पो चाहिने भो!
गाली गर्नुहुन्छ त्यसरी?
थाहा छैन, बिर्स्यौ?
कत्रो गुण लाएको छ
गाउँभरि तिम्रो बदनाम फैलाउनलाई!
ज़रा काट्दैछौ तिमी,
ओखती पो मास्दैछौ
गुरु चाहियो' रे उनलाई
निर्दयताको पाठ पढ़्नलाई
भनिदेऊ न है लाजै पचाएर
घरिघरि प्रेममा डुब्नलाई!
किन छक्कै परेर हेरेको
फना उठाएको साँपलाई?
साँपले तालीम लिएकै छैन
कथक नृत्यको चाल!
साटो फेर्छौ तिमी
लौ छाती उघारिदिएको छु
मुटु नै ताकेर प्रहार गरिदेऊ
एकै चोटमा निको हुनसकोस!
Posted by किरणकुमार राई at 1:06 AM No comments:
मायाजालमा बन्दी शब्दहरु-६
आफ्नो नाति अनिरुद्ध र उसकी प्रियतमा
उषालाई उकास्न त
द्वापर युगमा आएर
रगतको नदी नै बगायौ।
तिम्रो पवित्र चरणस्पर्शित तेजपुरमा
म पनि छु प्रेमी नै- कविताको,
कलियुगमा दर्शन दिएर
एकथोपा आँसु पनि खसाल्न सक्दैनौ?
साह्रै बुद्धू भएँ म,
रावणको त्यो यौटाचाहिँ टाउको
कसैले ल्याइदिनु नि हौ,
टाँस्ने थिएँ आजै मेरो शरीरमा!
शिष्यले भूल गरयो
गुरुले पाँसुलामा एक स्वाँट लायो
भोलिपल्टै उसले भूल सुधारयो।
ईश्वरले भूल गरयो
गुरु बन्ने लालसा लिएर
मान्छेले हातमा चाबुक लिई
चनाखो ईश्वर कहाँ भाग्यो भाग्यो!
ब्रह्मपुत्रको सबै पानी त्यसमा?
परस्परको अनुहारमा हेरेर
अर्काकै मुटु उधिनिरहेको देखेँ
मैले त पत्याइनँ
उनीहरुको प्रेम अमर हुनेछ
घुरेनमै फूल त फुल्यो नि
माला गाँस्नु भएन
मूलढोकामा तुर्लुङ्गै झुण्ड्याउने।
Posted by किरणकुमार राई at 4:45 AM No comments:
मायाजालमा बन्दी शब्दहरु-७
कसले रिस उठाएको थियो नि तिमीलाई?
सृष्टिको त्यों क्षणमा
बाङ्गो-टिङ्गो संसार सृष्टि गरिदियौ।
मेरो कुरा मान्छौ?
तिमीले जे भने पनि मानिदिउँला
साटोमा टम्म मिलेको संसार
एकपल्ट फेरि रचिदेऊ!
"अलिकति कड़ा खान्छौ?"
उसले सोध्यो मलाई।
जवाबमा मैले भनें-
"खाँदिनँ, नरम खाँदा त
आन्द्रा-भुँड़ी देखिसक्यो सबैले,
दिन्हौं कड़ा खाएर पनि
सम्पूर्ण शरीर कसरी छोप्नसकेको हँ तिमीले?"
तिमीले अरू कला केही जानेनौ?
मान्छेलाई पासो पार्ने
बिहेको जन्तीमा गएकी
अन्तरीको समाज-बहिष्कार भएछ
अत: ऊ बिचल्नी भइछे।
सभापतिको पर्सको कुनामा बास गर्ने ब्रुनीले
पर्सभित्र नै सुँक्क सुँक्क गर्दै आँसु झारिछे।
तिमी ढकमक्क फुलेको तस्वीर
कहिले हेर्नपाउनु नि इन्टरनेटमा?
कस्तो अङ्कुसेमा अड़्केको होला नि
दाहिने-देब्रे पारेर झट्कारिबस
गर्नुसम्म पाप गर्छन
प्रलय, महाप्रलय आउनेछ भन्दै
भयको टोपी ओड़िरहन्छन।
मायाजालमा बन्दी शब्दहरु-८
अरूले खनेकै बाटोमा
दुनियालाई कोलम्बस हुँ भनी
के उज्यालो मुहार भएको
नानी पाइछे उसले!
पक्कै पनि भगवानसित
अङ्कमाल गरेकी थिइछे कहिले।
कस्तो जिम्मेवारी नबुझ्ने कवि
जहाँ पायो त्यहीँ कविता जन्माउँछन
भर्खर दाँत उम्रेको बालक
कानैमा मोबाइल टँसाएर
ग्राहम बेललाई जिस्क्याउँदैछ-
"बाजे, तिमी त थोते भएछौ।"
बतासे कविता जन्माउन
बिँड़ी तान्दै सिँड़ी चढ्छौ
भुत्रोको ईश्वर-दर्शन पाउँछौ?
सृष्टि रोक्ने अधिकार
कसले दियो हँ तिमीलाई?
पराई गजक्कै परेर घर फर्कियो
बरालनी बज्यैको धारिलो यौटै प्रश्नमा
ऊ जिल्ल परयो।
कसले बाटो छेक्दोरहेछ हेरूँ त!
शब्दको कुचो बाट्दैछु
बादलहरू स्यार्र स्यार्र पार्दै
मेरो निलो आकाश बढ़ार्छु!
Posted by किरणकुमार राई at 4:44 AM No comments:
मायाजालमा बन्दी शब्दहरु-९
थाकैथाक छन सपनाहरु
तिमीलाई नै अधिकार दिन्छु
खोतलिहेर त सिह्रानीमा,
भूणहरू कति कुहिएछन सपनाका?
आइतबार नै हो आज
कविले छुट्टी दिएनन
पाप पखाल्न भक्तहरू
पापीहरू पाप पखाल्न कहाँ जान्छन?
झोलले नाक लागेकाहरू
सूप खान्छु भन्छन
हतारसित खाने हुँदा
माउण्ट एभरेस्टको उँचाइ नाप्ने
उनन्तीस हज़ार दुइ फीट सजिलै भनिदियौ
त्यत्रो अग्लो हिमालको उँचाइ नाप्ने
तिम्रो उँचाइ कति हँ?
गाह्रो छ नि जीवन थेग्न
सजिलो कहाँ छ भनेको छु र?
घरिघरि जिस्क्याउन आउने समयलाई
सँघारदेखि भगाउन कहाँ सकेको छु र?
लाटो एक बल्ड्याङ लड़ेको देख्यौं
बाठो तीन बल्ड्याङ लड़ेको पनि देख्यौं
संसार सृष्टि गर्ने ईश्वरलाई
मान्छेले झ्याइँकुटी पारेको झन
आफ्नै आँखाले देख्यौं।
मायाजालमा बन्दी शब्दहरु-१०
के चिटिक्क परेको गोलो फ्रेम रहेछ आकाशमा!
धरतीमा बेच्न पठाउनु नि त्यसलाई
उसको र मेरो तस्वीर टाँग्नलाई।
कसले जित्छ होला है
अन्तमा यो संसारलाई?
तिमीलाई त थाहा छ नि!
सुटुक्कै कानमा भनिदेऊ न मलाई
अहिलेदेखि नै अँगालो हाल्थें उसैलाई।
आजित भइसकें भन्छन- ईश्वर
थकित भइसकें भन्छन- ईश्वर
किन सृष्टि गरेछु नि
सधैं-सधैं सुन्नुपर्छ मैले यसरी
उसैको मात्र बिलौना।
वल्लो घरबाट हिजो लिएको पैंचो नून
पल्लो घरबाट आज लिएको पैंचो तेल
नमरे भोली तिर्नेछु,
ईश्वरबाट उहिल्यै पैंचो लिएको
सास तिर्न मलाई यत्रो समय लागेको?
ढोलक बजाउँदै रहिम आए,
बाँसुरी बजाउँदै कृष्ण आए,
थप्पड़ी बजाउँदै नानक आए
सँगसँगै झ्याली-झ्याम्टा बजाउँदै
कति-कति मान्छे आए,
पूर्वबाट आएका सबैजना पश्चिमतिर गए।
सकेनन तर कसैले गर्न परास्त तिमीलाई
तिम्रो मुटु त साँच्चै फलामको रहेछ
एकचोटि स्पर्श गर्नदेऊ न मलाई।
लौ आइहाली ऊ त
झुम्के बुलाकीमा चिरिच्याट्ट परेर
हातभरि हिलो छ मेरो
निस्कूँ कसरी म इस्टकोटमा झरिझुट्ट बनेर?
लौ झेल मेरो प्रेमको भारी।
दुनियाँले सिर्जेको काँड़ाघारी?
मायाजालमा बन्दी शब्दहरु-११
हतारमा बिहे गरयौ
रम्भा, मेनका र उर्वशीले
पालैपालो गाला चिमोट्दा
पश्चातापको आगोमा जल्नुसम्म जल्यौ।
छोड़ेर आएको अतीतलाई पनि
कविता मानेको छु,
भोग्दै गरेको वर्तमानलाई पनि
कविता ठानेको छु,
प्रिये त तिमीलाई कसैगरी भन्नसक्दिनँ म
तिमीले मेरो मुटुमा सिउरिदिएकी
खुशीको माला र पीड़ाको हारलाई
मैले मेरो जिन्दगी जानेको छु।
तिमी हारयौ कि म हारें
म कसरी सम्झूँ?
तिमीले जित्यौ कि मैले जितें
म कसरी बुझूँ?
जिन्दगी त यस्तै रहेछ
तिमी एकापट्टि रहेछौ
म अर्कोपट्टि रहेछु।
दाहिने-देब्रे हेर्दा त कसैलाई देख्दिनँ
तर हामी दुवैको आँखा छल्दै पछिल्तिरबाट
डोरी भने कसैले तान्दोरहेछ
मैले छर्लङ्गै जानें।
मलाई काखमा राख्दिनँ भन्छौ तिमी
मेरो भार खप्न सक्दिनँ भन्छौ तिमी
तिमीले धमास दिनैपर्दैन मलाई
म त तिमीसित छुटानाम गर्छु नै गर्छु
तिम्रो माया मार्छु नै मार्छु
तिमीले थाहा नै पाउन्नौ
कतिखेर सुटुक्कै सँघार नाघेर
जँघार म तर्छु नै तर्छु।
यता आऊ न भनी- उसले
उसको नजिक पुगें
ऊ परपर सर्दै गई।
उता जाऊ न भनी- उसले
म टाड़िन गएँ
ऊ वरवर सर्दै आई।
सङ्केत बुझ्न कति गाह्रो नि यो संसारमा!
शिरीषको अग्लो रूखमा
के झुण्डिएको त्यो?
टिपूँ? चढ़्छु ल?
आ, होस है, झर्छु!
बित्थाको फूल पो रहेछ!
Posted by किरणकुमार राई at 4:43 AM No comments:
मायाजालमा बन्दी शब्दहरु-१२
धरतीको एकपाखा त बिगारयो
उसले दिएकी आँसुले
मेरो संसार नै कसरी उजाड़्यो?
मुटुभरि ढुङ्गाको भारी बोकेर
कविताको स्कूल खोलूँ भन्छन उनी।
उनले खोलेको स्कूलमा
कविता आउन मान्ला र?
अशान्तिको अभेद्य पर्खाल देखी
साह्रै रिसाएर तिमीले भन्यौ'रे-
"गोरे आउन कि काले आउन
पुड़्के आउन कि अग्ले आउन
चिम्से आउन कि आँख्ले आउन
त्यसो नभन कञ्चनजङ्घा,
मेरो शिरमा हात राखेर कसम खाऊ त
तिमीलाई सप्पैभन्दा बेसी
कसको माया लाग्छ?
उचाल न मलाई उचाल
मन परुञ्जेल आकाशमाथिमाथि उचाल
मलाई त राम्ररी थाहा छ,
एकदिन त तिमीलाई
नाक लाग्छै लाग्छ
रूप त तिम्रो त्यतिखेर पो देखिन्छ
रणचण्डीको भेषमा आएर मलाई
कस्तो सकसमा पारेको मलाई?
आफूलाई भने यहाँ असारको पन्ध्र छ
अन्तर्वार्ता लिने रे?
जाउन न उनीहरू
वाल्मीकि र वेद्व्यासका अन्तर्वार्ता लिन
उनीहरु पो अहिले फुर्सदमा छन
मैले पनि उनीहरुको यौटै अन्तर्वार्ता पढ़ेको छुइनँ।
पुर्णेको रातलाई उज्यालो भन्नेहरू छँदैछन
पुर्णेकै रातलाई अँध्यारो मान्नेहरू पनि यहाँ छन
औंसीको रातलाई अँध्यारो गन्नेहरु त छँदैछन
औसीकै रातलाई उज्यालो ठान्नेहरू पनि यहीँ छन
यस्ता मान्छेहरु पनि देखेँ मैले यो संसारमा
आफ्नो फोस्रो फललाई सुन भन्दै बेच्छन बजारमा
अरुको झरिलो फूललाई पनि बासी ठान्दै फ्याँक्छन कुनामा।
लौ, तिमी नै भन
पुर्णेको रात उज्यालो कि
औंसीको रात अँध्यारो?
फोस्रो फल सुन कि झरिलो फूल हीरा?
मायाजालमा बन्दी शब्दहरु-१३
ऐठन पार्छन बोक्सीले।
मेरो कुरा अलि बेग्लै छ
तिमीलाई मात्र बोलाउँदैछु
आफ्नो भेद खोल्दैछु
मेरो खल्ती छामिहेर त
मलाई त सधैं ऐठन पार्छ रुपियाँले।
तिमी व्यथा पोखाउन आएकी?
नआऊ कसरी भनूँ म बस,
शान्त भएर बस
केहीबेरमा आफै थाहा पाउनेछ्यौ
शिरदेखि पैतालासम्म नियालेर हेर मलाई
छेवैमा तराजु छ
तराजुमा तिम्रो व्यथा माथि
मेरो व्यथा तल भएको पाउनेछ्यौ।
मैले त भनेकै हो नि
मेरो छेउमा नआऊ आयौ
कस्तो निष्ठुरी नि तिमी त!
जान्छु पनि नभनी
मलाई उजाड़ बनाएर कहाँ गयौ गयौ?
बाली सप्रिँदै थियो,
केही पानी चाहिएकै थियो
पानी पारिदेऊ न- भन्यो धनेले।
घाम लागिरहेकै थियो,
चुहुने घरको छानोले सास फेरिरहेकै थियो
पानी नपारिदेउ है- भन्यो मनेले।
दुवैजनाको प्रार्थनामा ईश्वर यति ख़ुशी भयो
मन राख्नैपरयो दुवैको भन्दै एक साँझ
ईश्वरले असिना पारेर
धनेको बाली र मनेको छानो ढुटो पारिदियो।
Posted by किरणकुमार राई at 4:42 AM No comments:
मायाजालमा बन्दी शब्दहरु-१४
के घट्यो, दुर्घटना?
छाकको भात जुठै छोड़ी खाली खुट्टै कुदेर गयो
रगतमा लथपथ हुँदै घाइतेलाई अस्पताल पुरयायो
घरको जायजेथा सबै बेचबिखन गरी बिरामीलाई निको तुल्यायो
पृथ्वीमा मैले साक्षात ईश्वर देखें।
मासु-भात कपाकप खायो
खल्ती नै खल्ती भएको कमीज ओड़्यो
यसो वरपर हेरयो
घाइतेको खल्ती छामछुम पारयो
"पानी, पानी" भन्दै गरेकालाई घाँटी निमोठ्यो
साँच्चै, पृथ्वीमा नै मैले साक्षात राक्षस भेटें।
कस्तो झरिलो उसको मुहार!
घाम झुल्कनअघि नै
झ्यालबाट सुटुक्कै बोलाएर
शिवले अमृत पो खुवाउने गर्छन कि!
लौ बस है भनेर
के बिदा माग्नु तिमीलाई?
सबैको आँखा छलेर
स्वर्गको त्यो एकान्त कोठामा
आउँछै त आउँछौ भेट्न मलाई।
बिहानै सुनें आइरहेको थियो
कहीँबाट कर्णमधुर नबुझिने राग
कसको आवाज होला नि?
आँखा मल्दै झ्यालबाट चिहाएँ
बालक सूर्यको ऐनामा झलक्क देखें
रियाजमा व्यस्त रहने गायक त
तिमी पो रहेछौ!
आएका थियौ उज्यालोघारीमा
आफ्नो नृत्य प्रदर्शन गर्न
गयौ नि कुण्ठाको भारी बिसाएर
वैकुण्ठको आँगन सिनिक्क बढ़ार्न।
कोही यहाँ लाज बचाउँछन
कोही यहाँ लाज पचाउँछन
कोही यहाँ कसैको लाज बचाइदिन्छन
कोही यहाँ कसैको लाज खोसिदिन्छन
तिमीलाई त पक्कै थाहा हुनुपर्ने
एकजना त कोही छ यो संसारमा
एक न एकदिन सबैको लाज
आफ्नो पोल्टामा सुटुक्क हालिदिन्छन।
मायाजालमा बन्दी शब्दहरु-१५
कसैले मुख छोड़्छन
कसैले हात छोड़्छन
बल नपुग्नेहरू त धेरै छन संसारमा
त्यसैले उनीहरु जीउ नै छोड़्छन।
टाउको उठाई उठाई सिलिङ चहारें
शिर निहुराई निहुराई खाटमुनि निहारें
कहाँ राखेँ हँ आयातित हतियार त्यो?
पोहोर नै थन्क्याएको काठ चिल्लाउने
मेरो आफ्नो हतियार पो हात लाग्यो
चिल्लो पारिरहन्छु म बस्ने र अरूलाई बसाउने कुर्सीहरू।
मेरा कर्मलाई वाहियात भनिदिन्छन
मैले त स्वीकार गरिदिएँ
वाहियात भन्नेहरूको कर्मलाई
मचाहिँ के भनेर स्वीकार गरूँ?
पूर्वबाट उदाएको घाम
सधें पश्चिममा नै डुबेको किन होला?
जन्म लिएपछि सबैले नै
यो धरतीलाई छोड़्नैपरेको किन होला?
ईश्वरले मान्छेलाई मिलजुल गर्न पठाएको धरतीमा
बाझ्नु र जुझ्नुमा मात्रै समय खेरो फालेको किन होला?
एकार्कालाई पानी खुवाउन पठाएको उसैले
तँ॰॰तँ॰॰म॰॰म॰॰ भन्दै रगतको होली खेलेको किन होला?
संसारलाई सपार्न पठाएको मान्छेलाई
उसले संसार बिगार्न मात्र खोजेको किन होला?
किन अँटाएको होला नि
त्यतिबिघ्न पानी सागरमा?
खेरो गइरहेछ त्यसै।
किन पठाएको होला नि
यतिबिघ्न मान्छे धरतीमा?
वैरी बनिरहेछ व्यर्थे।
तिमीले कस-कसलाई भेट्यौ
इडिपसको कमीज ओड़ेर
तिमीले कहाँ कहाँ देख्यौ
आफ्नै पुत्रद्वारा जोकास्ताको
सतीत्व हरण भएको?
लौ हिसाब देऊ त मलाई एक-एकको
टेबल ठोकेर सोध्नेछु म ईश्वरलाई
तिमीले किन नि धरतीमा
इडिपस नै इडिपस पठाएको?
Posted by किरणकुमार राई at 4:41 AM No comments:
मायाजालमा बन्दी शब्दहरु-१६
ज़माना परिवर्तन चाहियो भन्छन सबै
पहिलेको जमानामा बाबुको खुट्टा छोराले ढोग्नेगर्थ्यो
अहिलेको जमानामा छोराको खुट्टा बाबुले ढोगिरहेछन
संसार नै पल्टाउने
योभन्दा ठूलो जमानाको परिवर्तन
तिमीलाई अरू के चाहियो?
ढुङ्गा फोर्न गएको मान्छे
धेरैबेर भयो ढुङ्गेनीघारीबाट निस्केकै छैन
बल्लबल्ल सङ्केत पाइयो
ढुङ्गा त सलक्की बाहिर निस्केछ
ढुङ्गा फोर्ने मान्छे भने चट्टानभित्र सिद्राझैं चेप्टिएछ।
तक्मा थाप्ने होड़मा
जोड़ लगाउँछन भन्छन सबै
कहाँ होला त्यस्तो ठाउँ?
अचम्मको मेला लाग्छ जहाँ।
सबैलाई थाहा भएकै कुरो हो
एउटा तक्माले एकैजनाको आल्मारी त सजिन्छ नि
वाल्मीकि र वेदव्यास,
शेक्सपियर, होमर र दाँते
र हाम्रै भानुभक्तले खिप्ती गरी गरी कमाएको तक्माले
तिम्रो र हाम्रो घरको आल्मारी
कसरी ड्याम्मै सजिएका छन?
बालक सूर्यलाई अपहरण गरेर
कतिले लगे लगे पोल्टोमा घुसारेर।
कसरी होला नि?
सबैलाई झुक्याएर मुसुक्क हाँस्दै
हात मिलाउन आइपुग्छ फेरि
बिहानै टाइगर हिलमा
सबैलाई छक्क पारेर!
"के भाको हौ ऊ त?"
भन्दै साखिलो बन्ने दिदी र उनकी साथीलाई
कुन पानीकलमा भेटेका थिए नि
मत्स्येन्द्र प्रधान दाइले?
आज बिहान मैले पनि
हाम्रै गाउँको पानीकलमा
त्यही संवाद दुरुस्तै दोहोरयाउनेहरू भेटें
शायद उनीहरु नै होलान
अहिले त डाँड़ाको घाम भएछन
कति राम्रो संस्कार नि उनीहरुको!
नातिनीलाई पनि त्यही पाठ पढ़ाउँदै रहेछन।
मायाजालमा बन्दी शब्दहरु-१७
घुसखोर छोराको चर्तिकलाको
बुढ़ो बाबुले पस्केको
कवि र नदी
प्रकृतिका जम्ले सन्तान
बगिरहन्छन- आफ्नै गतिमा,
कसैको पर्वाह नगरी
शब्द र पानीमा।
घिसार्दै लगी समुद्रमा डुबाउलान
निश्चिन्हताको मुकुट पहिराएर
कहाँ छौ अचेल?
अब नफर्कनु है यो धरतीमा
तिम्रो जादू टुनाले अब नभ्याउने भयो
अँ उत्तानो पर्नु छ भने आऊ
तिमीलाई जिताउने जण्डा-जण्डा नातिहरू
लछेप्रै छन यहाँ।
धनमती त बम्बईको सपना
छातीभरि सिउरेर निस्केकी उहिल्यै
अत्तोपत्तो छैन हामीलाई
हिजै मात्र उसकी नातिनी भने
बज्युको जन्मथलोमा आइपुगी
र बम्बईको बयान गर्नथाली
एटेक, बीटेक, सीटेक
कुन्नि के पढ़िरहेकी ऊ
रयाम्पसम्म उक्लिने मोडेलसम्म भएकी छे'रे
आफ्नी बज्यू धनमतीको आधा सपना त पूरा गरिछे
अन्तर्वार्तामा सधैं भन्छिन रे उसले-
"बज्यूको सपना पूरा गरेरै छोड़्नेछु।"
मर्मको दहमा डुबेर
सुनौलो माछा पक्री
व्यथाको एक्युरियम निर्माण गर्दै
प्रदर्शनीमा सयौं आँखाहरूलाई झिज्याउने
उसको दिनचर्या देखेर
लट्ठ परेकी छे वैशाखकी उत्ताउली बेहुली।
Posted by किरणकुमार राई at 12:17 AM No comments:
मायाजालमा बन्दी शब्दहरु-१८
दास स्टुडियोको एककुनामा
के राम्रो फोटो सजिएको रहेछ फ्रेममा
ढिस्कनामाथि दुइटा ढाकर
बीचमा को हो नि उभिएको?
मान्छेको भीड़लाई ठेल्दै आइरहेका
कथाकार गुप्त प्रधानलाई
टाई-सुटमा सुसज्जित ठिटोले प्रश्न गर्दै रहेछ-
"हाम्रो बाजेचाहिँ कुन ढाकरमा छ हँ?"
"दुइटा ढाकरको बीचमा उभिनेचाहिँ बलबीर बाजे नै हुन?"
बल्ल थाहा भयो-
प्रश्न गर्ने ठिटो त रामसिँह्को नाति पो रहेछ।
तर घाम हो के?
बज्यूले आङ सेक्न पाएकी छैन
एक कुनामा डल्लो परेर पर्खिबसेकी छे
नातिनीको मोबाइल-वार्ताले सात डाँड़ा काटेर
संसारको रङ्गीचङ्गी देखिसक्यो।
बज्यू भने जुम्राघारीमा
रिहर्सल गरिरहेकी छे वैकुण्ठ यात्राको।
आँगनले घामको तस्वीर खिंचेर राख्न सक्दैन
बज्यूले आफ्नो अनुहार हेर्दै फुर्सदमा ताप्नलाई
वैकुण्ठको रमिते डाँड़ामा!
कस्तो राम्रो भाग्य मेरो,
भेटें नि मैले लिखापानीमा
जयमाया बज्यूकी नातिनीलाई।
लेख्दैछिन'रे बज्यूको `जीवनी'
आई बी सरको अन्तर्वार्ता लिन
दार्जीलिंङ पुग्छु भन्थी
साह्रै रहस्यमयी रहिछिन
प्रश्नहरु मलाई देखाउनै मानिनन।
सुन फलाउने सपना बोकेर आउने
बाजेको पसीना र बज्यूको रगतले
बाकसमा पसेर सुँकसुकाउँदै
बिदा माग्ने गरेको
अहिलेको कथा होइन
बाकस उघारेर फर्किआएका
कसैले देखेनन अहिलेसम्म!
भाइटीका थाप्न बोलाएकी?
फूल रोप्न त जानिनौ सयपत्रीको
माला ल्याउँछौ टल्किने कागजको।
सेलरोटीधरि पोल्न नजान्ने तिमी
रामशरण भैयाको दोकानबाट ल्याउँछौ।
अन्त, दौरा-सुरुवाल पहिरेर
के जानु भाइटीका थाप्न?
Posted by किरणकुमार राई at 11:30 PM No comments:
मायाजालमा बन्दी शब्दहरु-१९
तिम्रो कलामको नीब
इडिपसलाई जन्म दिँदा?
सेकेण्डमै यात्रा सिध्याउँदैछौं विश्वको।
डुल्दैछन तरुणी ठिटीहरू
क्षणभरमै ग्लोबल भिलेज
ल्यापटपलाई काखमा दूध चुसाउँदै।
मुसुक्क हाँसिरहेका रहेछन
के राम्रो फुलेछ
गुराँस र चाँप- त्यो पाखामा!
अहिले नै मेल गरिदिनुपरयो
लासले पनि अभिनय गर्छ
क्रेताको लाममा बसेर
पसलकी छिल्लिने सेल्स-गर्ल्ससित।
आत्म-मर्यादाको बाक्लो हुस्सेभित्र
रुमलिरहेको छ उसको रेलगाड़ी
मायाको घुमाउरो लिकमाथि।
हेरेकै थिए बाजेले पहाड़-
हेरेका छौं हामीले पनि पहाड़लाई-
राग अलाप्नै नजान्ने कौड़े भाले
कलाकारको मुकुट ओड़ेर
चौकीमा गजधम्म बसेको छ
कृत्रिम ठाँटको पगरीसितै।
Posted by किरणकुमार राई at 11:02 PM No comments:
कविता-सङ्कलन(सन २००९), प्रकाशक: मिरभ प्रकाशन, दार्जीलिङ, सम्पर्क ईमेल: rai.kirankumar@gmail.com
कविता-सङ्कलन(सन १९९५), प्रकाशक: ज्योत्स्ना प्रकाशन, दार्जीलिङ, सम्पर्क ईमेल: rai.kirankumar@gmail.com
पचास भारतीय नेपाली कविहरुको परिचयात्मक लेख सङ्कलन, प्रथम खण्ड(सन २००८), प्रकाशक: श्याम प्रकाशन, दार्जीलिङ, सम्पर्क ईमेल: rai.kirankumar@gmail.com
असमीया उपन्यासको नेपाली अनुवाद(सन १९९७), प्रकाशक: श्याम प्रकाशन, दार्जीलिङ, सम्पर्क ईमेल: rai.kirankumar@gmail.com
असमीया उपन्यासको नेपाली अनुवाद(सन २०००), प्रकाशक: साहित्य अकादेमी, नयाँ दिल्ली, सम्पर्क ईमेल: rai.kirankumar@gmail.com
फणीन्द्र कुमार देवचौधुरीकृत असमीया उपन्यासको नेपाली अनुवाद(सन २००४), प्रकाशक: जनपक्ष प्रकाशक, ७ सुपर मार्केट, गान्तोक (सिक्किम), सम्पर्क ईमेल: rai.kirankumar@gmail.com
असमीया उपन्यासको नेपाली अनुवाद(सन २००४), निर्माण प्रकाशन, गुम्पा घुर्बिसे, नाम्ची (सिक्किम), सम्पर्क ईमेल: rai.kirankumar@gmail.com
असमीया उपन्यासको नेपाली अनुवाद(सन २००८) निर्माण प्रकाशन, गुम्पा घुर्बिसे, नाम्ची (सिक्किम), सम्पर्क ईमेल: rai.kirankumar@gmail.com